Ka taxaddar WhatsApp: waxay kuu jabsan karaan sida Albert Rivera | Wararka IPhone
Ka taxaddar WhatsApp: waxay kuu jabsan karaan sida Albert Rivera
Jimcihii la soo dhaafay Albert Rivera, oo ah hoggaamiye muwaadin, ayaa la jabsaday akoonkiisa WhatsApp. Waxay ku guuleysteen inay galaan boggooda, marin u helaan taariikhdooda wada sheekeysiga, iyo sida iska cad, liistada xiriirkooda. Xaqiiqdu waxay tahay in aysan ahayn maafiyada Ruushka ama weerarada internetka ee Turkiga. Waxay ku guuleysteen inay marin ugu helaan koontadooda WhatsApp qaab aad u fudud. Si taxaddar leh ayaad u daawaneysaa maxaa yeelay waxay ku dhici kartaa qof walba. Waxaan sharaxeynaa sida ay u sameeyeen.
Wixii ku dhacay Albert Rivera waxay ahaayeen "fishing" fudud. Caadi ahaan, noocan xatooyada aqoonsiga ah, emayllada beenta ah ayaa loo adeegsadaa, iyadoo lagu daydo baananka, iyaga laftooda ah waxay kaa codsanayaan inaad ku qorto naanaystaada iyo lambarkaaga sirta cudurdaar kasta. Badanaa way fududahay in la ogaado, wayna ku sii adkaanaysaa in "wax lagu calaliyo" khiyaanada. Laakiin haddii aad ka hesho SMS sida la filayo barnaamijka WhatsApp, adigoo weydiinaya lambarka xaqiijinta, wax caadi ah maanta codsiyada qaarkood ee u baahan xaqiijinta xoogaa SMS ah, waxaad ku dhici kartaa dabinka aan waxba galabsan.
Habka loo adeegsaday
Waxay kaliya u baahnaayeen inay ogaadaan lambarka taleefanka Albert Rivera si ay ugu sii socdaan khiyaanada. Hadda ka dib, jabsadaha ayaa la xiriiray WhatsApp isagoo sheegaya in akoonkiisa la xaday, ama inuu si fudud u lumiyay lambarkiisa sirta ah oo uusan marin ka heli karin muuqaalkiisa. Marka WhatsApp wuxuu soo diraa lambar xaqiijin ah lambarka taleefanka ee hore loo tilmaamay SMS ahaan.
Ilaa hadda wax walbaa waa caadi. Waxaad kuheleysaa nambarka mobilkaaga, markii aad ku qorto arjiga waxaad mar labaad marin u yeelan doontaa koontadaada. Xeeladdu waxay ahayd kadib markii la ogeysiiyey WhatsApp, «hacker-ka» wuxuu SMS u diray Albert Rivera isagoo iska dhigaya adeeg run ah oo WhatsApp ah, weydiisanaya inuu dib ugu diro nambarka shaqeynta ee uu daqiiqado kahor helay.
Rivera waxay ka heshay wax caadi ah, iyadoo u aaminsan inay tahay amniga WhatsApp, waxayna dirtay lambarka. Markii dambiile-yarihu helay lambarkan, wuxuu awooday inuu galo astaanta Albert Rivera dhibaato la'aan.
Waa run inay macquul tahay in la raad raaco halka SMS laga soo diray, laakiin haddii laga sameeyay internetka, ama mobiil la soo xaday, tusaale ahaan, wax yar ayaa laga qaban karaa si loo aqoonsado "hackerka".
si Iska ilaali lambarka xaqiijinta SMS. Waa inaad si cad u cadeysaa halka loo diraayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ka taxaddar WhatsApp: waxay kuu jabsan karaan sida Albert Rivera
Taasi ma ahan mid gebi ahaanba cad maxaa yeelay si loo helo taariikhda wada sheekaysiga waa inay ku galaan (Weeraryahanka) oo wata aqoonsiga meesha ay ku taal WhatsApp. Weeraryahanku wuxuu sidoo kale u baahan lahaa aqoonsi (ha noqdo tufaax ama google) iyo lambarka sirta ah. Taasi ma sahlana, dadka ha ka nixin.
WhatsApp malahan erey sir ah ilaa aad kahesho aqoonsi labo qodob ah (waxaa ugu fiican inaad dhaqaajiso). Waxay kaliya marin ka heli karaan liiska xiriirka Albert iyo sidoo kale liiska kooxaha uu ka tirsan yahay. Xusuusnow in WhatsApp aysan ku kaydin farriimaha server-keeda sidaa darteed suurtagal ma ahan in la badbaadiyo fariimaha hore iyo / ama macluumaadka la xiriira ee la is dhaafsaday.
Duco akhristaha qaaliga ah.
Apple waxay dib u hawlgelisaa maalgelinta aan dulsaarka lahayn mar labaad dhammaan alaabteeda
Tani waa sida ugu wanaagsan ee iPhone 11 cusub uu u adkeysan karo dhicitaanka [Muuqaal]